Ny valintenin'i Steve Jobs momba ny karaman'ireo injenierany | Vaovao IPhone
Mahaliana fa saika ny olona rehetra nanao fihaonambe tamin'i Steve Jobs dia manana anekdôra hotantaraina. Ny CEO an'ny Apple dia namirapiratra noho ny fahaizany, nefa koa noho ny fipoakany ny fanaparam-pahefana, farafaharatsiny mba toy izany ny ankamaroan'ireo niasa ho azy, manam-pahaizana tsy fantatra. Ny farany amin'ireo anecdotes ireo dia notantarain'i Evan Doll, mpiara-manorina ny Flipboard ary injeniera taloha Apple tamin'ny 2003 ka hatramin'ny 2009. Izany no tsaroany ny fotoana nolazain'i Steve Jobs tamin'i Evan hoe maninona ny injenieran'ny Apple no tsy mitaky vola bebe kokoa.
Ny valintenin'i Jobs dia tena azy, fifangaroana mahaliana eo amin'ny famoretana, ny halozàna ary ny hakingana izay nahatonga ny iray tamin'izy ireo ho gaga na saika tsy voavaly. Avelanay ho anao ny ampahany amin'ny resaka mba hahafahanao mametraka ny tenanao amin'ny toe-javatra momba ilay hetsika:
injeniera: Fa maninona no tsy dia voaloa ara-bola ny injeniera ao amin'ny Apple?
Steve Jobs: Angamba ianao tokony hanontany ny taranakao hoe maninona no tsy heveriny ho mendrika bebe kokoa ianao.
Tamin'ny ankapobeny dia nazerany ilay injeniera fa ny fananana azy ao amin'ny Apple dia efa mendrika, ary angamba tsy dia ampy izy handoavana vola bebe kokoa. Io no fomba mahazatra an'ny Steve Jobs, karazana fanakianana manimba nefa ao ambadik'izany dia manafina karazana antony manosika, na izany aza, mihoatra ny indray mandeha io karazana valinteny na tsy fisian'ny fanohanana mivantana io dia namarana ny asan'ny maherin'ny iray miasa amin'ny Paoma. Na izany aza, Evan Doll dia naneho hevitra fa ny mpiasa ao amin'ny Apple dia be karama tokoa, saingy amin'ny tahiry, tsy karama ambany, noho izany ny volany dia miankina betsaka amin'ny làlan'i Apple. I Evan mihitsy no nivarotra ny tombam-bidiny tamin'ny 2004 tamin'ny $ 4.000, ny olana dia anio dia handany $ 500.000 izy ireo, tsy misy zavatra hafa ary tsy kely koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny valintenin'i Steve Jobs momba ny karaman'ireo injenierany
Mpanakanto 100 no nitory an'i Spotify noho ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona
TaiG koa dia miasa amin'ny iOS 9.2 Jailbreak